सेयर बजार तत्काल नाफा ‘बुक’ गर्नुपर्ने अवस्थामा छ - Karobar National Economic Daily
सेयर बजार तत्काल नाफा ‘बुक’ गर्नुपर्ने अवस्थामा छ
query_builderJuly 30, 2017 1:16 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility2384
अर्जुन पराजुली सेयर लगानीकर्ता
अप्रत्यक्ष रूपमा सेयर बजार सक्रिय भएको धेरै समय भए पनि प्रत्यक्ष रूपमा आउन समय लगाएका अर्जुन पराजुली सेयर लगानीकर्ता हुन् । पछिल्लो ५ वर्षदेखि आफूलाई सेयर लगानीकर्ता मात्र भन्न रुचाउने पराजुली हाल पूर्ण रूपमा सेयर बजारमा सक्रिय छन् । व्यक्तिगत रूपमा मात्र नभई संस्थागत रूपमा पनि सेयर लगानी गर्ने पराजुली सेयर बजार केही घट्न सक्ने बताउँछन् ।
वित्तीय प्रणालीमा आएको समस्याले सेयर बजार पनि प्रभावित भएको हुनाले हाल सेयर बजार टिकाइएको उनको तर्क छ । नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा वित्तीय क्षेत्रको व्याजदर र सेयर बजार एउटै दिशामा हुन सक्ने उनको तर्क छ । सेयर बजारमा लगानी गर्दा सूचनामा धेरै खेल्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
आफूले पाएको सूचनालाई पनि पुष्टि नगरी लगानी गर्दा उत्तिकै जोखिम हुने भएकाले पर्याप्त छलफल तथा सूचनाको पहुँचमा रहनुपर्ने उनी बताउँछन् । सूचना पाएर मात्र नभई पर्याप्त विश्लेषण तथा कम्पनीको वित्तीय विश्लेषण गरेर लगानीको निर्णय गर्न सुझाउने पराजुलीसँग सेयरमा लगानी गर्दा अपनाउनुपर्ने होसियारी तथा समग्र धितोपत्र बजारको सन्दर्भमा कारोबारले गरेको कुराकानी :
कहिलेदेखि सेयर बजारमा लगानी सुरु गर्नुभएको हो, पछिल्लो अवस्था कस्तो छ?
विगतमा सेयर बजार पार्ट टाइमको रूपमा प्रयोग गरेको थिएँ । निश्चित पेसामा संलग्न भएको हुनाले पनि प्रत्यक्ष रूपमा देखिन मिलेन । तर, पछिल्लो ५ वर्षदेखि सेयर बजारमा पूर्ण रूपमा सक्रिय छु । हालसम्मको मेरो पोर्टफोलियोको कुरा गर्ने हो भने पनि करिब एक करोड पुगेको छ ।
हाल मैले पार्ट टाइममा अन्य पेशाहरू गर्ने भएपनि मेरो पेसा व्यवसाय जे भने पनि सेयर बजार बनेको छ । तर, पछिल्लो समयमा अनलाइन मिडियाहरूले सेयर बजारलाई धेरै प्रभावित बनाएका छन् । सेयर लगानीकर्ताले पनि तिनै मिडियालाइ आधार बनाएर लगानीको निर्णय गर्ने गर्दा धेरै जोखिम पनि बढेको देखिन्छ ।
लगानी गर्दा कसरी लगानी गर्दै आउनु भएको छ ?
समान्यतया सेयर बजारमा लगानी गर्दा दोस्रो बजार घटेको समयमा किन्ने र बढेको समयमा बिक्री गर्ने हो । सेयर बजारले कुनै पनि घटनाक्रम घट्ने समयभन्दा अघि नै प्रक्रिया दिने भएकाले आफूले पाएको सूचनालाई पर्याप्त विश्लेषण गर्छु ।
साथै आफ्नो पोर्टफोलियोलाइ दिर्घकालीन र अल्पकालीन गरेर २ भागमा विभाजन गरेर लगानी गरेको छ । मेरो कुल लगानीमध्ये ४० प्रतिशत दिर्घकालीन र ६० प्रतिशत अल्पकालीन लगानी गर्छु । दिर्घकालीन लगानीको तत्काल प्रतिफल हेर्दिन तर, अल्पकालीनबाट तत्काल नाफा वा प्रतिफल आएको खण्डमा बुक गरिहाल्ने गरेको छु । सेयर बजारको अवस्था पनि तत्काल नाफा बुक गर्ने गरी लगानी गर्नुपर्ने आवस्थावाट गुज्रिरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्यमा धेरै उतारचढाव आएको हुनाले पनि लगानी गर्न जोखिमपूर्ण देखिएको हो कि भन्ने लाग्छ । तर, विगत ३ वर्षदेखि प्रतिफल दिएको राष्ट्रिय स्तरको माइक्रोफाइनान्समा लगानी गर्दा घाटा भने हँुदैन । तर, हालको अवस्थामा सेयर बजारको हल्लाका भरमा आम्दानी गर्छु भनेर सम्भावना छैन ।
आफूले किन्ने सेयरको पहिचान कसरी गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो पुँजी बजारमा ९ वटा उपसमूह छन् । ती मध्ये नियमित प्रतिफलको दृष्टिकोणबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयर उपयुक्त मानिदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयर उपयुक्त मानिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बिमा कम्पनीको सेयरमा पनि प्रतिफल देखिन्छ ।
तर, वित्तीय अवस्था सवल भएको कम्पनीको वित्तीय अवस्था तथा कार्यसम्पादनलाई विश्लेषण गरेर लगानी गर्ने निर्णय लिन्छु । त्यसमा पनि कम्पनीकोे किताबी मूल्य प्रतिसेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात तथा खराब कर्जा लगायतका सूचकलाई बढी ध्यान दिन्छु ।
बैंकहरूले सेयर बजार सहज दिएको अवस्था पनि छैन, व्याजदर वढेको अवस्थामा पनि सेयर पनि बढेको छ रु अचम्म हैन ?
पछिल्लो समयमा बैंक वित्तीय संस्थाले सहज रूपमा सेयर धितो कर्जा दिएका छैनन् । दिएको खण्डमा पनि व्याजदर १६ देखि १७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो व्याजदरमा कर्जा लिएर सेयर बजारमा लगानी गर्दा घाटा हुने अवस्था छ ।
सेयर बजार र व्याजदर एउटै दिशामा गएको सन्दर्भमा विकसित मुलुक र विकासशील मुलुकको सेयर बजारलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नु हँुदैन । नेपाल भनेको विकासशील मुलुक भएको हुनाले व्याजदर र सेयर बजार एउटै दिशामा जान सक्छ । अर्को कुरा सेयर बजारसँग सम्बन्धित घटनाक्रम पनि यही बेला भएको हुनाले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च भएको हो । बजारको अवस्था सुधार आउँदा बैंकको व्याजदर मात्र सबै होइन, अन्य पक्षहरू पनि संलग्न हुन्छ ।
सेयर बजारको कता जाने देख्नुभएको छ?
हाल सेयर बजार सकारात्मक देखिए पनि केही घट्ने जस्तो देखिन्छ । तर, बजारका पूर्वाधारको सन्दर्भमा हेर्दा धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ता मैत्री वातावरण तयार गर्दै आएको छ । अनलाइन सेयर कारोबार सुरु हुने भएको छ ।
अनलाइनले गर्दा सेयर कारोबार गर्दा सहज र छरितो हुने भएको छ । यसले गर्दा सेयर लगानीकर्ताको मनोवल उच्च हँुदै गएको छ । लगानीकर्ताको मनोवल उच्च हुँदा सेयर बजारमा सुधार आउने भने निश्चित छ ।
सेयर बजार वित्तीय प्रणाली लगानीकर्ता